जय कार्की, ANTUF प्रकाशित मिति : बुध, फाल्गुन २८, २०७६
• कलाकार- सुमन लामा,अल ईण्डिया रेडियो खरसाङ्ग, दार्जिलिङ्ग,अम्बटे
विश्वव्यापी महामारीको रुपलिईसकेको कोरोना भाईरसबाट जनतालाई मुक्त गर्न र थप फैलिन नदिन सरकारले लक डाउनको घोषणा गरेकोले घर बाहिर निस्कने सुरसार नै थिएन । हिजोबाट एकजनामा सो रोगको लक्षण देखा परेको छ । उनले आफनो परिवार लगायतलाई संक्रमण गराएको आशंका गरिएको छ । यो रोग १९ वर्षे विद्यार्थीले फ्रान्सबाट कतारको ट्रान्जिट हुँदै नेपाल भित्र्याएकी हुन । सबै आतंकित छन तर सबै घर बाहिर नै छन । र, यो रोगले यहाँपनि महाँमारीकोरुप लिने ठूलो खतरा रहेको छ ।
यो महामारीले कस्ता कस्ता महाशक्ति राष्टहरुको मेरुदण्डमात्र भाँचेको छैन, उनिहरुको विकासको मोडल कति खोक्रोरहेछ भनि सावित पनि गरेको छ । अझ एकथरीको विश्लेषण त पूँजिवादी व्यवस्था वाहिरबाट हेर्दा स्वस्थ देखिन्छ भित्रबाट यो त्यति नै कुरुप रहेछ । सानो क्यारेबियन देश समाजवादी क्युबा बराबरीको हैशियत पनि राख्दो रहेनछ भनिरहेका छन । सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था नभएकोले र हरेक विषयलाई निजीकरणमा परिणत गरिदिएकोले यो महामारीको कहरमा मजदुर, कर्मचारी, सामान्य जनता तथा बृद्धबृद्धा सबैले सबैभन्दा ठूलो असुरक्षा महशुस गरिरहेका छन ।
• जय कार्की
श्रमिकहरुमध्ये पनि असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको रोजगारी खुस्किएकोले भोक भोकै मर्ने खतरा बढेको छ । सरकार स्वयं नो वर्क नो पे भनि कुर्लिरहेछ । कस्तो लज्जास्पद स्थिति ?
यो तिन महिनाको अवधिमा दुई करोड पचास लाख मानिसले रोजगारी गुमाईसकेका छन । सरकारले उनिहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरिदिएकोले जागीर खुस्कियो अब के खाने भन्न थालेका छन । बेरोजगारको अर्को भयंकर महामारी फैलिदैछ । अमेरिकामा रोगले गाँज्न थालेपछि १५ लाख मानिसहरु पूर्ण बेरोजगार भैसकेका छन ।
विकासशील देशहरुको तथ्याँक पाउन कठिन छ जब हडताल, विरोध जुलुश, तोडफोड र सरकार फेर्ने आन्दोलन हुन्छ । हो, त्यतिवेला प्रष्ट भएर आउँने छ । यो महामारीका कारण संसारको राजनैतिक प्रणालीमा समेत फेरबदल आउनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।
हो, यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै ” यो नाम लिन पनि मन नलाग्ने रोगले दिक्क भएका, मानसिकरुपले थकित र आतंकित भएका अनि कतै मेरो पालो आयो भने भनि आशंकाको भुमरीमा फसिरहेका साथीहरुलाई ताजा पार्नकोलागि आनन्द महशुस गरुन” भन्ने हेतुले हाम्रो ‘अनलाईनमा केही हप्ता अघि पोष्ट गरेको मेण्डोलिनको अति मीठो धुन साथीहरुलाई शुभप्रभातको विकल्पमा विहान विहानै मिरमिरे साँझमा सातै रङ्गी इन्द्रेणी रानी, सजाई देउ मेरो जोवन भन्ने गीतको धुन शेयर गरें ।’
पछि अलि कस्तो कस्तो लाग्यो । शुभप्रभातमा मिरमिरे साँझमा………..धुन पठाउँने यो कस्तो खुस्केट रहेछ ? जोकर ।? ” यसलाई कोरोनाले भेट्टाएछकी भने होला मेरा आदरणीय मित्रहरुले ।”
हाम्रो अनलाईनमा यो मीठो धुनसंगै यति मीठो मेण्डोलिन बजाउने कलाकार को होलान ? उनलाई सबैका सामु चिनाउँनुपर्छ । अबश्य पनि कुनै दिन भेटिने छन भनेको आज त्यस्तै तीन हप्ता भयो होला । वास्तवमा आज विहान उहाँसित भेट भयो । मेरो फेसबुकमा एड सुमन लामा भनि मेण्डोलिन बोकेको अनि ह्याट लगाएको युवा अवस्थाको राम्रो फोटोसहित प्रारम्भमा नै आएर देखा परे ।
मैले चिनिहालें । मैले खोजेको कलाकार यिनै हुन । यिनको नाम, गाम र पेशा सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्दै खुशी हुँदै एक्लै बोलेँ ” खुशी लाग्यो, अन्तत सुमन लामालाई भेटें मैले ।”
भान्सा कोठामा चिया पकाउँदै गरेकी मेरो जीवनसंगिनीे रेणुले ”त्यस्तो के भेट्नुभयो यति विहानै” भनिन् ।
”मैले खोजेको मेण्डोलिन बजाउँने कलाकारलाई भेटें ।”
परिचय बिना उनको यो सिर्जना कपी गर्न अलि संकोच लागेको थियो । अनि कसरी भेट्टाउँने होला भनि खुब खोजें, उनि फेला परेनन् । किनकी मैले यो धुन जसको फेसबुकमा फेला पारेको थिएँ, शायद उनि इस्रायलमा कार्यरत गोरर्खा सैनिक थिए ।
यसरी नै मेरो स्कूले जीवनको साथीलाई झण्डै दुईवर्ष अघि साँडे तीन दशकपछि भेटेको थिएँ । उनको नाम हो संझना थापा । तर वास्तवमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाटचाँही भएको छैन । तर हामी असल मित्र हौं । हामी एक अर्कामाथि हुकुम चलाउँछौं, कहिलेकहिं त भारत र पाकिस्तान वा प्यालेष्टाइन र इस्रायल जस्तै बाझाबाझ र भिडन्त पनि गर्छौं ।
अनि एक अर्कालाई मनग्गे राम्रा राम्रा सुझाव दिन्छौं । राम्रा नराम्रा घटनाहरुबारे छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्छौं र सहमत भएको र सहमत गराएकोमा हर्षोल्लासित हुन्छौं । अचेल हामी दाजु बहिनीमा रुपान्तरण भएका छौं ।
त्यस्तैगरी यि मिलनसार कलाकार सुमन लामालाई भेटें । फेसबुकमा एड गरेँ अनि ”मैले तपाईको बाँसुरी फिल्मको मेण्डोलिनको धुन हालेको छु । तपाईको परिचय खुब खोजे, कतै पाईन भनि मेसेन्जरमा शेयर गरिदिएँ ।”
उनि अति खुशीमात्र भएनन् आफ्नो छोटो परिचय पनि लेखेर पठाई हाले । यि मिलनसार श्याम लामा त बरिष्ठ संगीतकार नै रहेछन । लामो अनुभव बटुलेका, कैयौं चर्चित संगीतकार र गायक गायिकाहरुले गाएको गीतहरुमा मेण्डोलिन बजाएर झनै लोकप्रिय र कर्णप्रिय बनाएका रहेछन ।
बाजा बजाउने कलाकारहरु जहिले पनि पाश्र्वमा हुनेहुनाले उनिहरुको परिचय खासै आउँदैन । त्यस्तै कुनै प्रसंगवशमात्र उनिहरुको परिचय सार्वजनिक हुन्छ । आउँछ त केवल गायक गायिका तथा संगीतकारको नाम । हो, त्यसैभित्र एकमुष्ट भएर आउँछ बाजा बजाउने कलाकारहरुको खुबी र सिर्जना । त्यसैमध्येका एक हुन सुमन लामा । उनको सफलताप्रति नेपाली गीत संगीत क्षेत्रले ठूलो गौरब गर्ने ठाउँ प्रशस्तमात्रा छ । उनको यो परिचयले सबैले आनान्दाभुति गर्नेछन भन्ने मलाई लागेको छ ।
बास्तबमा उनी प्रख्यात संगीतकार रचनाकार सिंहमान वाईवाको भान्जा र चर्चित गायिका हिरादेबी वाईबाको भाई रहेछन् । यसको मतलब उनि संगीत र गीत आफ्नो पुस्तासंगै लिएर जन्मेका रहेछन भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । बाँकी कलाकार सुमन लामाको आफ्नै आधिकारिक भनाईबाट।
सबैभन्दा मनपर्ने गायक नारायण गोपाल अनि संगीतकार गोपाल योन्जन र अम्बर गुरूङ्ग हुन- सुमन लामा
♦ तपाईंको शुभनाम ?
⇒ सुमन लामा
♦ पिताको शुभनाम ?
⇒ स्व. कालु लामा
♦ तपाईंको ठेकाना ?
♦ अनि तपाईको संगीतप्रतिको पृष्ठभूमि ?
⇒ म बास्तवमा प्रख्यात लोकसंगीतकार अनि रचनाकार स्वर्गीय सिङ्गमान वाईबाको भानिज हुँ अनि लोकगायिका हीरादेबी वाईबाको भाई
♦ यो क्षेत्रमा कहिलेदेखि संलग्न हुनुभयो ?
⇒ छ बर्षको अल्पआयुदेखि नै संगीत क्षेत्रमा संलग्न रही ४९ बर्ष बिताईसकेको छु ।
♦ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ सुमनजी ?
⇒ म अल ईण्डिया रेडियो खरसाङ्गमा विगत ३५ बर्षदेखि नै मेण्डोलिनमा सरकारी मान्यता प्राप्त कलाकारको मान्यता प्राप्त गरेको छु ।
♦ तपाईको मन पर्ने गितकार संगीतकार कलाकारहरु ?
⇒ मेरो सबैभन्दा मन पर्ने गायक नारायण गोपाल अनि संगीतकार गोपाल योन्जन अनि अम्बर गुरूङ्ग हुन।
♦ कुन कुन संगीतकार र गायक गायिकाले गाएको गीतमा धुन भर्नुभयो ?
⇒ मैले मेण्डोलिन अरूणा लामा, कर्म योन्जन, मणिकमल छेत्री, डेज़ी बराईली, बसन्त छेत्री, कुमार सुब्बा, दावाग्याल्मो,पेमा लामा, वाङ्गेल लामा, शिलाबहादुर, कुन्ती मोक्तानको गीत र संगीतमा भरेको छु ।
यी सबै प्रतिष्ठित कलाकारहरूसंग बजाई सकेको छु त्यसरी नै नवोदित कलाकारहरूसंग पनि।
यो अघिल्लो पोष्ट हो, यो पनि पढ्नुहोस र मेण्डोलिनको धुन पनि सुन्नुहोस
नेपाली फिल्म बाँसुरीको सुपरहिट गीत ”मिरमिरे साँझमा सातै रङ्गी इण्द्रेणी रानी, सजाई देउ मेरो जोबन’‘ बोलको गीतको संगीतकार हुनुहुन्छ निकै चर्चित संगीतकार रंजित गज्मेर ।
सो गीतको यो धुन मन परेकोले इण्डियन गोर्खाज इस्रायलबाट यहाँ साभार गरेका छौं । यति मीठो मेण्डोलिन बजाउँने कलाकारको नाम थाहा हुनसकेन, उहाँको यो कला र कार्यकुशलताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ । त्यो नाम अगाडि आउन आवश्यक छ ।सम्पादक
कलाकार- सुमन लामा,अल ईण्डिया रेडियो खरसाङ्ग, दार्जिलिङ्ग,अम्बटे